Date My Pet » Ny fomba hahatongavana ho Date-Sexy fampiasana ny dimy Mailo Tsara
Ny stereotype ho an'ny vehivavy Sexy dia Pin-up ankizivavy amin'ny adala miolakolaka mitafy afa-tsy vitsivitsy tapa-akanjo. Na izany aza, Misy zavatra hafa koa ny hoe sexy noho ny hoditra no fijeriny azy, ary manana baring ny valahan'ny, tratra, sy ny andilany ny modely. Raha milaza izy ireo fa ny zavatra tsapanao lasa ianao, marina izy ireo. Raha mieritreritra ihany hoe ratsy, ny vatanao mazàna ny andohalambo an-tsipìka sy ny lohanao mba mihatohatoka amin'ny fomba hafahafa, angamba miezaka ny manafina ny tavanao. Fa rehefa mahatsapa fa tsara tarehy ianao sy Sexy, ny fihetsika tsara kokoa, ianao mandeha amim-pahatokiana kokoa, ary mirona mba hisambotra ny saina bebe kokoa. Koa ahoana no ho lasa iray Sexy mialoha ny daty? Simple. Aoka ny dimy miasa saina ho anareo.
Toy ny hoe mandeha “ny masony dia ny varavaran'ny ny fanahy”. Direct amin'ny masony dia mety ho tena matanjaka tsara mba ho azo antoka ny peepers dia Sexy ampy mibanjina. Karakarao tsara ny volomaso, ary hanaisotra izay nania volo. Atỳ, ny daty mandrakizay dia tsy te-hitondra ny masony eny amin'ny anao.
Raha te ho sexy, efa nahazo ny manimbolo Sexy. Mifidy ny hanitra mety ho tena zava-tsarotra. Raha toa ianao ka amin'ny fivarotana mba hitsapa ny sasany fofona, Ataovy izay tsy manao akory. Atỳ, afaka tena hanaraka tsara ny ditin-kazo manitra miezaka ianao, dia toy izany no, manao izany mora kokoa ny manapa-kevitra amin'ny hanitra. Koa, aza douse ny tenanao amin'ny loatra mialoha ny daty. Price ampy fa ny daty dia ho afaka haka ny hanitry manerana ny latabatra, Tsy manerana ny efitrano.
Ny iray amin'ireo malaza aphrodisiacs dia oyster. Mihoatra noho ny fahaizany ny mampitombo ny firaisana ara-nofo fiara, karazana sasany ahitana be dia be ny fanitso, izay mahasoa ny olona amin'ny mahavoky hoditra. Sy ny tantaram-pitiavana iray hafa Sexy Fifaliana noho ny fahatsapana ny tsiro dia frezy. Tsy vitan'ny no ho Sexy vokatry ny mihinana amin'ny sokola, izany koa dia manampy whiten nify ho sexy tsiky fa ny daty dia tsy ho afaka manohitra.
Music lehibe fomba hametraka olona iray ny fihetseham-po. Misy hira izay anao handeha avy “tovovavy varavarana manaraka” ny “firaisana ara-nofo sultry andriamanibavy”. Raha toa ka mila tosika fanampiny mba hanome anareo ampy matoky alohan'ny fivoriana ny daty, mihaino ny hira toy ny “Maditra Girl "amin'ny Beyoncé, “Bokotra” amin'ny Pussycat Dolls, na inona na inona izay mitondra ny andriamanibavy anaty avy.
Mihoatra noho ny vatana sexy, dia zava-dehibe ny manana hoditra Sexy. Fitandremana ny hoditra hydrated dia tena ilaina ny mitandrina azy supple sy malefaka ny mikasika. Misotroa betsaka ny rano sy menaka fanosotra amin'ny hoditra mandrakariva mampihatra araka ny fandroana. Tsy misy na inona na inona Sexy momba ny maina, chaffed hoditra.
Inona no vehivavy te?
7 Hevitra Unique tanteraka Fa A Date